एक भारतीय ट्याग गरिएको "लोग" को समाचार ब्लग - THE INDIAN FACE
१० चीजहरू जुन तपाईं Laia Sanz बारे थाहा पाउँनुहुन्न: परीक्षण, एन्डुरो र र्यालीको एक कथा
के मोटरसाइकल केवल केटाहरूको लागि हो? Laia sanz, यस विश्वासलाई पाँच विश्व च्याम्पियनशिप जीतहरूमा भत्काउनुहोस् एन्डुरो र दौड जित्ने पनि जहाँ उसका विपक्षीहरू सबै मानिस थिए। गति र एड्रेनालाईन तपाईको रगतको माध्यमबाट चल्छ र यसको कुनै सीमा वा बाधा छैन स्पेनिश। के तपाइँ यसको इतिहास याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
टोनी हकको बारेमा १० जिज्ञासा: यसको उत्कृष्टमा स्केट
Ollie 540? यदि तपाईंलाई थाहा छ हामी केको बारेमा कुरा गर्दैछौं भने, तपाईंलाई थाहा छ हाम्रो लेख आज को बारेमा छः स्केट लिजेन्ड टोनी हक। र उनको अनुहार चिन्न यो असम्भव छ, जब उनी आफ्नो खेल उपलब्धिहरुका साथसाथै एक मिडिया क्यारेक्टर पनि बनेका छन जसले आफ्नो युक्तिहरू अन्तिममा पुर्‍याउन आफ्नै भिडियो गेम पनि बनाइसकेका छन। स्केट इतिहासमा, छोटकरीमा: एक प्रतिभाशाली।
10 चीजहरू जुन तपाईलाई नादिया Comăneci बारे थाहा छैन: कलात्मक जिमनास्टिक तारा
सधैं उनको विशिष्ट रातो धनुको साथ, प्रतीकात्मक र प्रतिभाशाली १ year बर्षे रोमानियाली केटी आफ्नो लजालु मुस्कान पछाडि लुक्दै के थियो? नादिया Comăneci को लागी एक कथा हुनेछ जिम्नास्टिक मोन्ट्रियल मा एक पूर्ण 10 हासिल पछि विश्व। को कम्युनिष्ट शासनबाट भाग्नु रोमानिया र संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्ने यो व्यायामशाला आज दृढता र सिद्धताको लागि प्रशंसाको योग्य छ।
१० चीजहरू जुन तपाईंले एन्जल निटोको बारेमा थाहा पाउनु भएन
परी Nieto, यस महान एथलीटको सफलता र प्रस्थान एक विडम्बना थियो। १ 13 नम्बरको अन्धविश्वासी, यो यो हो कि प्रख्यात मोटरसाइक्लिंग विश्व चैम्पियन आफ्नो व्यावसायिक जीवन भर मा प्राप्त विजय को संख्या। 12 + 1। उसले जो विजय संग भरियो Españaआज हाम्रो पोष्टको नायक हो।
१० चीजहरू जुन तपाईं ली मिशेलको बारेमा जान्नुहुन्न
लि Michele। यस अमेरिकी अभिनेत्री जो आफ्नो प्रसिद्ध भूमिकाको लागि प्रसिद्ध बनेकी छिन् खुशी, यो थिएटर र ब्रोडवे जस्ता ठूला चरणहरूका लागि प्रतिभाको कारण पनि हो। यद्यपि उसको व्यक्तित्वको बारेमा गरेका घोटालाहरूले उनलाई शो व्यवसायमा समस्या निम्त्याएको छ। के तपाई यस बारे बढी जान्न चाहानुहुन्छ विवादास्पद कलाकार?
Perico Delgado को बारे मा 10 चीजहरु जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ।
"म चलचित्रको पात्र थिएँ, मैले मानिसहरूलाई उत्साहित बनाएँ" र पक्कै पनि, को विजेता भने टूर डे फ्रान्स १ 1988 मा स्पेनमा साइकल चलाउन ºº०º मोड दियो। 'पातलो प्याराकीट' सबैका लागि, 'पेद्रो' औपचारिकताका लागि, उनी विश्वको सबैभन्दा उत्तम साइकिल चालक हुन्। पेरिको डेलगाडो, बिरामी केट स्पेनिश साइक्लि।।
10 चीजहरू जुन तपाईं एथलीट जेसी ओन्सको बारेमा जान्न सक्नुहुन्न।
पछाडिका कथाहरू महान खेलाडीहरु तिनीहरू हाम्रो जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा प्रेरणा दिन्छन्। जब हामी हाम्रो आवेगलाई अनुसरण गर्न इच्छुक हुन्छौं मानिसहरूले सीमाहरू र परिस्थितिहरूलाई जित्न सक्ने क्षमताको अतुलनीय मूल्य छ। र भन्दा राम्रो उदाहरण जेसी ओवेन्स, त्यहाँ छैन: "छेउमा नहेर्नुहोस्, घोडाहरूको जस्तो गर्नुहोस्, तिनीहरू मात्र दौडन्छन्"। यो कथा पढ्नुहोस्, यो अद्भुत छ।
कार्लोस सेन्ज जूनियरको बारेमा १० चीजहरू जुन तपाईंले बुझ्नुपर्दछ
'एल माटाडोर' को छोरा भएको कारण यो एक धेरै ठूलो जिम्मेवारी को लागी ल्याउनुपर्दछ, तर यो धावक आफ्नो स्पेन चलाउन को लागी आफ्नो योग्यता को पूर्ण योग्यता बनाउन को लागी कसरी आफ्नो पहिचान बनाउने थाहा छ, मा गर्व संग स्पेन मा सूत्र २। हामी कुरा गर्छौं कार्लोस सेन्ज जूनियर के तपाईंलाई थाहा छ बच्चाको रूपमा उनको सबैभन्दा ठूलो मूर्ति फर्नान्डो एलोन्सो हो? र अब, तिनीहरू सँगै प्रतिस्पर्धा गर्छन् र राम्रा साथीहरू हुन्।
१० चीजहरू जुन तपाईलाई युइन बारे थाहा थिएन Bolt: संसारमा सब भन्दा छिटो मान्छे।
यहाँ छ संसारको सब भन्दा छिटो मान्छे को रहस्य, ठीक छ, हामी मात्र तपाईलाई केहि सुराग दिनेछौं: सहि मुद्रा,% २% उर्जालाई हावामा, str२ चाल र स्कोलियोसिसलाई हराउन। हो ... अन्य विश्व आवाज, तर Usain Bolt उसले आफ्नो कमजोरीलाई आफ्नो उत्तम औजारको रूपमा प्रयोग गरेको छ र विश्वलाई एक एथलेटिक शो प्रदान गर्दछ जुन मार्वल चलचित्रको बाहिर केही देखिन्छ।
टाइगर वुड्सको बारेमा १० चीजहरू तपाईंले थाहा पाउनुपर्दछ
एक मूर्तिको उदय र पतन। को यस महान को इतिहास गल्फ उनी व्यक्तिगत घोटालाहरूले दागी छिन् जुन उनको व्यवसायिक जीवनमा कुनै ध्यान नदिई। यद्यपि यस एथलीटको प्रतिभा र लगनशीलताले हामीलाई उनको यात्रालाई कहिलै बिर्सिन सकेन, उसको नाम पनि कम: टाइगर वुड्स।
जोन रहमको बारेमा १० कुराहरु: सर्वश्रेष्ठ स्पेनिश गोल्फर
"नियमित, ग्रिट र दृष्टिकोण" यो बास्कको जादू सुत्र हो आफ्नो खेल गोलहरू प्राप्त गर्न। जोन राहम्म स्पेनिसलाई गर्व गर्ने उनीसँग धेरै कारणहरू छन्। उसको लागि उसको शैली गल्फ र उसको व्यवसायिक उपलब्धिहरु उनीहरु मध्ये एक उत्कृष्ट गोल्फ इतिहास हो जसको साक्षी छ। के तपाईंले उसको बारेमा पहिले नै सुनिसक्नुभएको छ? यो लेख पछि, उहाँको नाम पक्कै तपाईंलाई परिचित हुनेछ।
१० चीजहरू जुन तपाईलाई एस्टन कुच्छरको बारे थाहा थिएन
तपाईंको 'नौकरी' मा स्टीव जॉब्सको चित्रणले तपाईंलाई मानवताको लागि समाधानको स्रोतको रूपमा टेक्नोलोजीमा डुबाउने विचार दिएको हुन सक्छ। सत्य यो हो एशटन कुचेर; अभिनेता, मोडेल र लगानीकर्ता, दिएका छन् मनोरन्जनबाट एक कदम अलग सामाजिक प्रश्नहरू सम्बोधन गर्न र गहिरा प्रभाव उत्पन्न गर्न। के तपाईंलाई थाहा छ कि उसको एउटा फाउन्डेसन छ जुन मानव बेचबिखनको बिरूद्ध लड्छ?
१० चीजहरू जुन तपाईलाई येशू कल्लेजाको बारेमा थाहा थिएन: स्पेनका साहसी
"यदि तपाईंलाई आफ्नो जीवन मनपर्दैन भने यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्!" र हो उसले हामीलाई भन्छ जीसस कालेजा, यो किनभने यो राम्रो सल्लाह हुनु पर्छ। यो साहसी छ free spirit वैध पहाडप्रतिको उनको जिज्ञासा र प्रेमले उसलाई आफ्नो व्यावसायिक र व्यक्तिगत जीवनमा सबैभन्दा ठूलो सफलताहरू प्रदान गरेको छ। español र संसारको सब भन्दा टाढा कुनाको पारखी, हामी आफैले राख्नु भन्दा अरु कुनै सीमाहरु थाहा छैन।
Dulceida को बारे मा 10 चीजहरु जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ
फेशन र सामाजिक नेटवर्कको रानी। यदि केहि भने Dulceida प्रेमले डरलाई जित्न सक्छ भनेर हामीलाई सिकाइएको छ। एउटी महिला जसले आफ्नो शौक बनाए: फेशन, उनको साम्राज्य र नेटवर्क उनको उत्तम सहयोगी। हामी तपाईंलाई यसको केहि सब भन्दा सान्दर्भिक डाटा बताउँछौं फेसन ब्लगर त्यसले प्रत्येक सामाजिक नेटवर्कमा आक्रमण गरेको छ।